စာအုပ်အမည် --- ရတနာနတ်မယ် သို့မဟုတ် တခါတုန်းက သမ္မတကတော်
စာရေးဆရာ --- သန်းဝင်းလှိုင်
ထုတ်ဝေသည့်တိုက် --- လွင်ဦးစာပေ(လှည်းတန်း)
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၅၊ မတ်လ
တန်ဖိုး --- ၁၅၀၀ ကျပ်
စာမျက်နှာ --- ၁၂၅ မျက်နှာ
ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် ပထမအိမ်ထောင်နှစ်ဆက်နှင့် သား သုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့ပြီး ဒေါ်ခင်မေသန်းသည် ပထမအိမ်ထောင်နှင့် သားသမီး သုံးဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် သမီးနှစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက် ထပ်မံထွန်းကားသောကြောင့် ရင်းနှီးသူများကို ဒေါ်ခင်မေသန်းက He three, Me three, We three ဟူ၍ နောက်ပြောင်ပြောဆိုခဲ့လေသည်။
》》စာမျက်နှာ - ၁၀ မှ
ဦးနေဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်မေသန်းတို့၏သမီး ခင်စန္ဒာဝင်းသည် ငယ်စဉ် ကျောင်းနေစဉ်ကပင် အင်္ဂလိပ်စာ အလွန်ညံ့သော်လည်း အထက ၁ ဒဂုံကျောင်းမှ ၁၀ တန်း အောင်မြင်၍ ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ခွင့် ရခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ မှ M. B. B. S ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ဆေးပညာဘွဲ့ ရပြီးနောက် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက်၍ ဘွဲ့ရဆရာဝန်အဖြစ် ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ အမှတ် ၂ တပ်မတော်ဆေးရုံ ( BMH-2) တွင် သားဖွားနှင့် မီးယပ်ဆရာဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ရာ ဗိုလ်မှူးအဖြစ်သို့ တိုးမြှင့်ခံရသည်။ ယင်းနောက် ဒေါက်တာ ခင်စန္ဒာဝင်းသည် ၁၉၇၆ခု၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗြိတိန်တော်ဝင်ဆေးသိပ္ပံကောလိပ်၌ ပညာသင်ကြားရန် ( MRC - OG ) မဟာဆေးသိပ္ပံစာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရာ ကျရှုံးခဲ့သည်။ သူနှင့်အတူ ဖြေဆိုသူပေါင်း ၁၄ ဦးရှိရာ ၁၁ ဦး အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သမီးဖြစ်သူ အင်္ဂလိပ်စာညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ဦးနေဝင်းသည် ပညာရေးဝန်ကြီးအား ခေါ်ယူ၍ အစိုးရကျောင်းများအားလုံးတွင် သူငယ်တန်းမှစ၍ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
》》စာမျက်နှာ - ၁၁ မှ
လင်းပင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် ခိုင်မာပြတ်သားသော နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးအခြေခံ မရှိခဲ့ချေ။ မူလနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်သည် သီပေါမင်း၏အာဏာစက်မှ လွတ်ကင်းသောထီးနန်းတစ်ဆက် ထူထောင်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အခြေအနေသည် ရုတ်ခြည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးနောက် လင်းပင်မဟာမိတ်အဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှုသည် ဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ သို့သော် နဂိုကတည်းကပင် ခိုင်မာပြတ်သားသောလမ်းစဉ်၊ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသလို စစ်ရေးအင်အားလည်း မညီမျှချေ။ စိုင်ကော်၍ ချုံပေါ်ရောက်ရသကဲ့သို့ မြန်မာ့ထီးနန်းဆန့်ကျင်ရေးစော်ဘွားတစ်စု၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
" သူ့(လင်းပင်မင်းသား) တောင်းဆိုချက်များသည် ဘာမျှ အရေးမကြီး။ အရေးကြီးသည်မှာ သူ့ကို တိုင်းပြည်မှ တခြားသို့ရောက်သွားအောင် လုပ်ရန်သာဖြစ်သည် " ဟု နောင်တွင် ဂျော့ စကော့ ( J. George Scolt ) ၏ Gazelteer of Upper Burma and Shan States စာအုပ်၌ ရေးသားထားသကဲ့သို့ ဗြိတိသျှကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးစဉ်က လင်းပင်မင်းသား၏တောင်းဆိုမှုများသည် မြန်မာမင်းမှုထမ်းများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်အချက်မှတစ်ပါး ကျန်အချက်များအားလုံးသည် သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်များသာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပေသည်။
》》စာမျက်နှာ - ၅၀ မှ
ဤသို့ဖြင့် လင်းပင်မင်းသားသည် ၁၈၈၇ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်တွင် ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်တို့ထံ လက်နက်ချလိုက်ရလေသည်။
ထို့နောက် လင်းပင်မင်းသားကို မိုးနဲမှ မိုးသောက်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပို့လိုက်သည်။ ထိုစဉ်က ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့သည် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။ ထို့ကြောင့် လင်းပင်မင်းသားအား ရန်ကုန်တွင် ကြာကြာထားလျှင် ၎င်းတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ဟု တွက်ဆကာ လင်းပင်မင်းသားကို ရန်ကုန်မှ အိန္ဒိယသို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်သည်။ မူလ ဗြိတိသျှတို့သည် လင်းပင်မင်းသားအား ရန်ကုန် ( သို့မဟုတ် ) မော်လမြိုင်၌ အိမ်တစ်လုံးပေးထားပါမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သော်လည်း ထိုကတိကို တိုင်းကြီးပြည်ကြီးသား အလွန်သိက္ခာရှိပါသည်၊ ကတိတည်ပါသည်ဆိုသော ဗြိတိသျှတို့သည် လွယ်လွယ်ဖြင့်ပင် အဆိုပါကတိကို ချိုးဖောက်ခဲ့လေသည်။
》》စာမျက်နှာ - ၅၁ မှ
မြန်မာပြည်နောက်ခံ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သော ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် ( The Purple Plain ) တွင် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ဂရေဂရီပက် ( Gregory Peck ) နှင့်တွဲ၍ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း ခံရသည်။ သို့သော် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မလျော်ညီသည့်ကိစ္စရပ်များကို ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများဘက်မှ တောင်းဆိုချက်များကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကို ရတနာနတ်မယ်က ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်စကြာ၏ဇနီး ဝင်းမင်းသန်းနှင့် ရိုက်ကူးဖြစ်သွားသည်။ ဝင်းမင်းသန်း၏ အမည်ရင်းမှာ မစ္စ ဟယ်လဂါ ဂျွန်ဆင် ခေါ် ဝင်းဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးမြို့သူဖြစ်သည်။ ခရမ်းရောင်လွင်ပြင်ရုပ်ရှင်ကားမှာ အိပ်ခ်ျ အီး ဘိတ်ဆိုသူ၏ဝတ္ထုကို အခြေခံံရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗမာပြည်ရောက် မဟာမိတ်စစ်ဗိုလ်တစ်ဦး၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းကလေးဖြစ်သည်။
》》စာမျက်နှာ - ၉၄ မှ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးခရီးမှ ပြန်ရောက်ပြီးနောက် နှစ်ရက်အကြာတွင် တပ်မတော်ဂေါက်ကွင်း၌ ရတနာနတ်မယ်၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတို့နှင့်အတူ ဂေါက်ကစားရာ ဦးနေဝင်းသည် အရှုံးကြီး ရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုနေ့က ဦးနေဝင်း ရှုံးမဲ မဲကာ ဒေါသပေါက်ကွဲနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အိမ်ရောက်သည်အထိ ဒေါသအရှိန် မပြယ်သေးပေ။ ဝီစကီပုလင်းတစ်ဝက်ကုန်သည်အထိ သောက်၍ မူးယစ်ကာ ညနေက ဂေါက်ကွင်း၌ သူရှုံးခဲ့သည်ကို စကားအစပြန်ဖော်၍ လင်မယားချင်း စကားများခဲ့ကြသည်။ ရတနာနတ်မယ်အားလည်း ဆဲရေးတိုင်းထွာကာ ဆေးလိပ်ပြာခွက်ဖြင့် ကောက်ပေါက်လိုက်ရာ ရတနာနတ်မယ် နဖူးကွဲသွားလေသည်။ ရတနာနတ်မယ်ကလည်း ရှက်ဒေါသဖြင့် ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့် ဦးနေဝင်းအား ပစ်ကန်လိုက်ရာ ချက်ကောင်းထိသွား၍လား မသိ၊ ဦးနေဝင်း အသံပင်မထွက်နိုင်တော့ဘဲ ထိုင်ကျသွားသည်ဟု သိရသည်။
ထို့နောက် ရတနာနတ်မယ်သည် သူ့ပစ္စည်းများယူကာ ဝင်ဒါမီယာရှိ မဆလခေတ် လယ်ယာနှင့်သစ်တောဌာနဝန်ကြီး ဦးရဲခေါင်၏ဒုတိယဇနီးအိမ်သို့ ဆင်းသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအိမ်၌ သုံးပတ်ကြာသည်အထိ ဦးနေဝင်း ပြန်လာခေါ်နိုး စောင့်မျှော်ရှာသေးသည်။ မလာသည့်အဆုံး သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်မည်ဟုဆိုတာ ကြုံရာလေယာဉ်ဖြင့် အီတလီနိုင်ငံသို့ အပြီးပြန်သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက် ဦးနေဝင်းသည် ၁၉၇၇၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်သို့ လှည့်လည်စစ်ဆေးရာ ဇနီးဖြစ်သူ ရတနာနတ်မယ် လိုက်ပါခြင်း မရှိတော့ချေ။ ထိုနေ့မတိုင်မီကပင် လင်မယားချင်း ကွာရှင်းပြတ်စဲသွားပြီဟု ဆိုရပေမည်။ နောက်ပိုင်း ခရီးစဉ်များ၌လည်း ရတနာနတ်မယ် မပါတော့ချေ။
ဤသို့ဖြင့် သူတို့နှစ်ဦး၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ငါးလမျှအကြာတွင် ပြိုကွဲသွားခဲ့ရလေသည်။ ဦးနေဝင်းနှင့် ရတနာနတ်မယ်တို့အကြောင်းကို " ဦးနေဝင်းနှင့် ရက်ပေါင်း ၁၅၀ " ဆိုသော စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေမည့်သတင်းသဲ့သဲ့ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဦးနေဝင်းက လျော်ကြေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သန်း ပေးချေ၍ စာမူကို အပြီးအပိုင်ဝယ်ယူကာ ဖျောက်ပစ်လိုက်လေသည်။ စာမူလည်း ထိုအချိန်မှစ၍ အစပျောက်သွားတော့သည်။
》》စာမျက်နှာ - ၁၀၆/၁၀၇ မှ
တစ်ခါက ရန်ကုန်မြို့ ရတနာသိင်္ဃစံအိမ်တော်ကြီးတွင် လင်းပင်မိသားစုအတူနေကြစဉ် လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ် ဦးဆောင်၍ တူမတော်များနှင့် အိမ်တော်မှ မောရစ်မိုင်နာကားကိုစီး၍ လမ်းထွက်ကြသည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာအမျိုးသမီးများ အင်္ကျီပါးဝတ်သည်ကို ဝံသာနုစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေသော အမျိုးသားထုက ကန့်ကွက်နေချိန်ဖြစ်သည်။
လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်တို့ တူဝရီးများ စီးလာသည့်ကားကလေးသည် လမ်းတွင် လူအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ကို ဖြတ်မောင်းရသည့်နေရာသို့ ရောက်လာသည်။ လူအုပ်ကြီးက အနီးကပ် ကားအတွင်း ငုံကြည့်လိုက်ရာ လှပသောအမျိုးသမီးလေးများ အင်္ကျီပါးဝတ်ထားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ လူအုပ်ကြီးသည် ကားကိုဝိုင်းတားပြီး ကားပေါ်ရှိအမျိုးသမီးများအား အင်္ကျီပါးမဝတ်ရန် တောင်းဆိုသည့်အပြင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဆုတ်ပစ်မည်ဟုပင် အရေးဆိုလာလေသည်။
လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်က ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့် သူတို့သည် မြန်မာမင်းဆွေမင်းမျိုးများဖြစ်ကြောင်း၊ လင်းပင်မင်းသားကြီး၏ သမီးတော်နှင့် မြေးတော်များဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုင်းရိုင်းပြပြ မပြုလုပ်ရန် ချိုချိုသာသာဖြင့် တောင်းပန်ရှာသေးသည်။ တောင်းပန်ကာမှ လူအုပ်ကြီးမှ အချို့အမျိုးသားများက ပိုကဲလာကာ အတင်းပင် အင်္ကျီဆုတ်ပစ်မည်ဟု အတင့်ရဲလာကြသည်။
ထိပ်တင်မလတ်သည် " ကဲ၊ ဒီလောက်တောင် တောင်းပန်လို့မရရင် ငရဲသွားရသွားရ၊ အမှုပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်တဲ့သဘောနဲ့ ပစ်မှ ဖြစ်တော့မယ် " ဟုဆိုကာ ပိုက်ဆံအိတ်အတွင်းမှ မိန်းမကိုင် ပစ္စတိုသေနတ်ငယ်လေးကို ထုတ်၍ ချိန်လေတော့သည်။ လင်းပင်တင်မလတ်တို့မှာ ကြောက်ရွံ့လွန်း၍ ကားနောက်တွင် တုန်ယင်နေလေသည်။ တကယ်ပစ်မည်ကို ရိပ်မိသော လူရမ်းကားအုပ်စုသည် ထိုအခါကျမှ ရှဲသွားကြ၍ ကားကို လူအုပ်ထဲမှ မောင်းထွက်ခဲ့ရသည်။ လင်းပင်တင်မလတ်က " အရီးလေးဘုရားရယ်၊ တကယ်ပဲ ပစ်မှာလား " ဟုမေးရာ " ပြောမရတဲ့အဆုံးတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ်ရမှာပဲ " ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
》》စာမျက်နှာ ၈၆/၈၈ မှ
ဒီစာအုပ်မှာ နိဒါန်းနဲ့ အခန်း ငါးခန်း ပါဝင်ပါတယ်။
အခန်း (၁) - ရတနာနတ်မယ်၏မျိုးရိုးဇာတိ
အခန်း (၂) - ဖွားတော် ရေနံ့သာခင်ခင်ကြီး
အခန်း (၃) - မယ်တော်လင်းပင်ထိပ်တင်မလတ်
အခန်း (၄) - ဇွန်ရို့စ် ဘယ်လာမီ ခေါ် ရတနာနတ်မယ်
အခန်း (၅) - ခုတော့ ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး ဖြစ်ခဲ့ပြီ
စာမျက်နှာ ၁၂၅ မျက်နှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒီစာအုပ်နာမည်က " ရတနာနတ်မယ် သို့မဟုတ် တခါတုန်းက သမ္မတကတော် " ဆိုတာကြောင့် ရတနာနတ်မယ်အကြောင်းနဲ့ ဦးနေဝင်းအကြောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖတ်ရှုရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ထားသလို မပါရှိပါဘူး။ တခြားသော အခန်းကဏ္ဍတွေကသာ ပိုမိုပါဝင်နေတာပါ။ ရတနာနတ်မယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်အမည်နဲ့ စာအုပ်နဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့လည်း ကျွန်တော် ယူဆမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ယူဆချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာသွားစေတဲ့အချက်ကတော့ စာအုပ်အဆုံးသတ်ခါနီး ပါလာတဲ့ သူတို့အိမ်ထောင်သက် ' ငါးလမျှ ' ဆိုတာပါပဲ။ ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးရှိဖို့ မသေချာတဲ့ကိစ္စကိုး။ စွန့်စားခန်းဝတ္ထုတို့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ဝတ္ထုတို့လိုလည်း မဟုတ်တော့ ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ဟာ ဘာမှကို စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းတာပါ။
ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရတနာနတ်မယ်ရဲ့တူတစ်ယောက်က စာအုပ်ထဲမှာ အချက်အလက်အမှားအယွင်းတွေ ပါနေတာကြောင့်ဆိုပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ့်အကြောင်း သတင်းတစ်ခုကို MJN ထဲမှာ ကျွန်တော် ဖတ်မိလိုက်ပါသေးတယ်။ မေလတုန်းကပါ။ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာ လုပ်မယ်လို့ ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်းကို ဘယ်သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့သလဲဆိုတာ သိသူရှိရင် ပြောပေးကြပါဦး။ ကျွန်တော် မဖတ်မိလိုက်လို့ပါ။
Publisher Name: လွင်ဦးစာပေ
Publisher Address: အမှတ် (၁၆ အေ) လှည်းတန်း ၂ လမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
Publisher Phone Number: 09259289154